"Taloha sy ankehitriny" an'ny ahitra artifisialy
Tamin'ny volana aprily 1966, ny Astrodome tany Houston, Texas, ilay kianja mitafon'entana lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany, dia niandry am-pahanginana ny fanombohan'ny ligin'ny baseball toy ny mahazatra, saingy ny tsy nitovizany dia talohan'ny nanombohana dia nametraka sokatra artifisialy voalohany i Chemstrand eo amin'ny kianja filalaovana baseball- ”Astrotu ...
May ny hena artifisialy, ary eto indray ny ahitra artifisialy!
Ao ambadiky ny fahadisoam-panantenan'ny baolina kitra sinoa, tompon-daka eran'izao tontolo izao ny indostria turf artifica sinoa. Vao tsy ela akory izay, Jiangsu Co-cipta Lawn, amin'ny maha "anjara voalohany ny turf artifisialy" eo amin'ny tsenan'ny A-share, dia nahasarika ny sain'ny maro. Hitan'ny Shell Investment Research fa na Chi ...
Inona avy ireo karazana turf artifisialy azo ampiasaina sy ny fomba hisafidianana?
Ny turf artifisialy dia natao sy novolavolaina ho an'ny lesoka ahitra voajanahary. Ny turf voajanahary dia voakasiky ny toetr'andro, ny fitantanana sy ny fiarovana ary ny antony hafa. Ny turf artifisialy dia manana tombony tsy azo soloina ny ahitra voajanahary. Ny turf artifisialy dia tsy mila mandany loharanon-karena ...